Pisces - the romantic kakhulu futhi enesihawu uphawu zezinkanyezi. Ukuze ubuhlobo muhle, kepha uma kukhona izinkinga eziphawulekayo ekuphileni, kubonakala sengathi umhlaba uyachitheka. Ukuze Pisces uzizwa ukhululekile nomlingani, kumelwe silondoloze emideni umbukiso nolwandle enduduzo. Nokho, uma abalingani babo liphindwe njalo nimphathe ngothando ukuba Pisces, kuze Awama-Melodrama co-ukuphequlula. Yiqiniso, imishado ezinye zezimpawu ezikhombisa lithele ngempela, njengalapho kukhona ukuhambisana Pisces futhi Aquarius, noma, kunalokho, ibuhlungu ngoba izinhlanzi.
Union Pisces futhi Aries kokuvamile nzima bobabili abangane bomshado. Aries - merry futhi pretty umuntu evulekile, onezimfihlo ngakho futhi Pisces ongangeneki engaqondakali kuye. Aries uyozizwa umlingani wakho cool nalo futhi akwabi imizwa yakhe. Inhlanzi njalo aphile ezweni lakhe eduze kancane, futhi bayajabula ngempela. Njengoba okuningi njengoba wazama ukujabulisa Aries ukuba Pisces kukho konke lokhu, bona, ngeke evulekile kushisekela. Nakuba ngesikhathi esifanayo ngigeza e izinhlanzi bangaphila sizibona uthando.
izimpawu Ihambisana Pisces futhi Taurus zinzima kakhulu. Kulesi umbimbi, bobabili abalingani uhlushwa ukungaqondani. Iqiniso ukuthi Taurus - ungumuntu othanda izinto ezibonakalayo, nenhlanzi, kunalokho, uphawu ezingokomoya. Zihluke kakhulu, ngoba lokhu kukhona eziningi ezingqubuzana. Umona - imbangela evamile isehlukaniso somshado. Konke kuqala lokuthi izinhlanzi azungeze ngokwabo nge imfihlakalo isitimela. Taurus uqala usola uzakwethu, ngezinye izikhathi ngisho ngaphandle kwesizathu. Ngenxa yalokho, bobabili baqala ukubheka sokubheka ohlangothini ukuthi ekugcineni kubenza abangabazi. Kodwa indima yokuhola kuleli umshado uba ku Taurus, futhi uma ungathola ukhiye ukuze izinhlanzi futhi babe romantic more, abalingani kuyoba okusondele kakhulu.
Umshado phakathi Gemini futhi Pisces nazo oyinkimbinkimbi kakhulu. Abashadile kudingeka asekelwe yesibili kakhulu. Okungukuthi, bobabili badinga umlingani oqinile, futhi Pisces kanye Gemini abe induku okuqinile izinhlamvu. Ngaphezu kwalokho, Pisces iphupho nomuntu uzogcwalisa umphelelisi zabo, romantic, ukulungele ngokoqobo uhlangane ndawonye nabo. Kodwa lokhu akusebenzi amawele abathanda inkululeko futhi enithanda ukuba nomuntu ezimele. Ngenxa yalokho, ukuphila komkhaya kokubili iphenduke okukhulu ukuthi ungakwazi kuphela yokususa isehlukaniso. Lokhu kusiza wehlukile kokuba kwedivayisi kuyofikwa Pisces futhi Aquarius. Kodwa, uma bobabili bafuna ukugcina umkhaya undawonye, kungenzeka, uma nje ngamunye zilalele umlingani kanye ngazo zonke izindlela ingamsiza nobunzima.
Ubuhlobo Somdlavuza futhi Pisces abanothando futhi esimangalisayo nesifundisayo. Umshado elikhanyayo, ngokomzwelo, kodwa lokhu kwenzeka kuphela kubantu ezingeni obuseduze ezimpilweni zabo. Ebuhlotsheni evamile umndeni, bayakwazi ukuletha nomunye kuze kube isibambo, ngisho nasesahlukanisweni. Kodwa ngokushesha Cancer uzozama ukuyenza konke ukudoba kube lula.
Umshado Pisces noLeo kuyinto engavamile. Angaba ubambe kuphela uma bobabili abathandayo bayabanjwa ngu umqondo esingokomoya. Kulokhu, Leo kuyoba umholi, njengoba Pisces bayokujabulela ukukusiza kuye kwezamabhizinisi ozithandayo. Union afana ukuhambisana Pisces futhi Aquarius. Uma bobabili-orchestra, ukuba benze izinto ezahlukene, ukuthi umshado liphuke msinyana, njengokungathi Leo njalo ufuna ukujikeleza umphakathi egqamile futhi ukufuna romance. Inhlanzi nge ngokushesha kakhulu baya ezweni yabo encane.
Ubuhlobo Pisces futhi Virgo cishe ephelele. Bayaqonda futhi umphelelisi nomunye. Bobabili nezihlakaniphi kanye imfihlakalo kancane. Ayathanda nomunye. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi i-Virgin - nguye kudingeka Pisces, Virgo ngaphandle uqala ababacindezela ngomsebenzi njalo. Phela, Virgin - the yomsebenzi okuphakade.
Union of Pisces futhi Libra kusekelwe bakhangane eqinile. Libra - uphawu imfihlakalo ukuthi imimoya enamandla Pisces. Kukho konke ukuphila kwami bezama ukuxazulula uzakwethu, kodwa iholela yokuthi izinhlanzi ngokwabo yibo abafuna ukubona ibhalansi yabo. Ngenxa yalokho puzzle abazange ixazululwe. Kodwa Pisces wanelisa ukuthi ibhalansi khona, futhi ngenxa yalokhu alungele noma yini.
Umshado Pisces futhi Scorpio angabhekwa ezinhle. Imvelo, izingane zokudala futhi enothando, abathanda imibuthano umndeni. Kulesi sisekelo, wanezela ubuhlobo bomshado wawo buqinile.
Pisces futhi Sagittarius - umshado kunzima, kodwa kungenzeka. Fish owabona umlingani ukuchuma ngokwezinto ezibonakalayo, impumelelo nokuchuma. Sagittarius kubhekwa kuwuphawu Pisces kwezomnotho ukuthi uyoliduduza nokuhleleka endlini. Kungenzeka ukuthi lo mshado titawusungulwa sokubalwa.
Ubuhlobo Pisces ne-Capricorn zinhle kuzo zonke izici. Lapha, bobabili abalingani bazokwazi bona yonke imibono yakho kanye nokuhuheka nezinkanuko. Inkinga kuphela yokuthola ukuphila okujabulisayo kungaba isimo lapho izinhlanzi ngeke senqabe ukudala induduzo ekhaya.
Ukufaneleka of Pisces futhi Aquarius enhle. Pisces ukuze Aquarius - abantu ngempela yasemhlabeni, nobuthakathaka nokushiyeka kwabo. Pisces futhi ubone Aquarius ukwesekwa kakhulu umndeni wakhe. Aquarius enquma Fish futhi silondoloze satellite konke. Owesifazane indoda Pisces-Aquarius - kwedivayisi, ekahle kokubili abalingani.
Two Fish - abalingani ngokuphelele alinganayo, ukuze wonke umuntu wabo kuyodingeka uthathele indima ubuholi. Union ingajabula kakhulu, futhi kungokufanayo nangendoda - a yisicefe futhi isimiso. Lapha indima ebalulekile ukudlala isimo sezimali.
Horoscope: Virgo namadoda nabesifazane bazo Taurus Oluvumelana
Ihhotela Falcon Ezokungcebeleka 2 * (India, Goa): izithombe kanye nokubuyekeza
Rosacea ebukekayo, kuyini na?